Xiaomi သည်၎င်း၏ပထမဆုံး Mi Home စတိုးဆိုင်ကိုအိန္ဒိယတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် Androidsis ပါ
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကဖြစ်သည် ငါမင်းကိုပြောခဲ့သားပဲ Androidsis မှာ Xiaomi ကအိန္ဒိယမှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်ဖွင့်တော့မည်၊ ခြောက်ရက်လောက်အကြာမှာဒီသတင်းကအမှန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးသည်ယနေ့တွင်၎င်း၏ပထမဆုံး Mi Home စတိုးဆိုင်ကို Bangalore ၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်.
အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင် Xiaomi ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်၊ စင်္ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့်အိန္ဒိယအပါအ ၀ င်စုစုပေါင်းငါးနိုင်ငံတွင်ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်များရှိသည်။
အိန္ဒိယရဲ့ပထမဆုံး Mi Home စတိုးဖြစ်ပါတယ် အဆင့်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွင်တည်ရှိသည် Bangalore ၌၎င်း၊ ၎င်း၌၎င်း Xiaomi catalog မှထုတ်ကုန်အားလုံးကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်စမတ်ဖုန်းများ၊ နာမည်ကြီး Mi Band များ၊ လေသန့်စင်စက်များ၊ စမတ်နာရီများ၊ ပါဝါဘဏ်များ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များအပါအ ၀ င်
ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ Mi Home နှင့် mi.com ကျေးဇူးကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်တတ်နိုင်သည် ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကြားဖြတ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကို၎င်း၏ ၀ ယ်သူများအားတိုက်ရိုက်ဝေငှသည် ရိုးရာလက်လီမော်ဒယ်များတွင်ပိုတွေ့ရများသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Xiaomi က Mi Home စတိုးကိုသေချာပေးထားတယ် မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအမြဲလိုလို stock ရှိလိမ့်မယ် ၎င်းမှာစတိုးဆိုင်မှအော်ဒါမဖြည့်နိုင်သောရှားရှားပါးပါးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်ထုတ်ကုန်သည်ကုန်ပစ္စည်းမရှိသည့်တိုင် mi.com မှတဆင့်၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုကိုအာမခံပေးမည့်ကုဒ်တစ်ခုအားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
ပုံကို Android Authority မှပံ့ပိုးသည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးသည်ဒေလီ၊ မွန်ဘိုင်း၊ Hyderabad နှင့် Chennai တို့တွင်အလားတူစတိုးဆိုင်များဖွင့်ရန်အစီအစဉ်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် Bangalore တွင်ဤ Mi Home ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ရပ်တန့်မနေပါ။ စုစုပေါင်း၊ Xiaomi သည်လာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်း Mi Home စတိုးတစ်ရာဖွင့်ရန်စီစဉ်နေသည်.
ပြီးနောက်တရုတ်၊ အိန္ဒိယသည် Xiaomi ၏ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည်; ၂၀၁၆ တွင်၎င်း၏ ၀ င်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ရှိပြီးကုမ္ပဏီကကြေငြာထားပြီးဖြစ်သည် ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မယ် လာမယ့် ၃-၅ နှစ်အတွင်း ၂၀၂၂ မှာတိုင်းပြည်ရဲ့စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံကိုမကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi သည်အိန္ဒိယတွင်ပထမဆုံးအိမ်စတိုးဖွင့်လှစ်လိုက်သည်